Ravalomanana Marc : Mitady hialokaloka ambadiky ny Fampihavanana -
AccueilRaharaham-pirenenaRavalomanana Marc : Mitady hialokaloka ambadiky ny Fampihavanana
Mazava, ary nahitsy ny nambaran’ ny filohan’ ny antenimieran-doholona mahakasika ny lafin’ny fampihavanana raha nihaona tamin’ny filohan’ ny CFM Maka Alphonse sy ireo mambran’ ny fampihavanana ny tenany omaly tetsy Anosy, mazava tokoa mantsy ny lalàna efa misy fa tsy tokony hahazo famotsoran-keloka ny olona izay nandatsa-dra « maro ary misy mihitsy ireo mpanao politika no mihevitra fa paika iray ahafahan’izy ireo manadio tena ny fampihavanana. Izy ireo anefa dia nahavita heloka be vava fony izy ireo nitantana ny firenena, toa ny famonoan’olona sy ny tsy fanarahan-dalàna izany. Nefa raha izay tokoa ny zava-misy dia manome vahana ny tsy fitoviana izany ho an’ny vahoaka tsotra sy ny mpanao politika izay samy nahavita heloka. Ho ahy manokana, dia tsy izay loatra no fampihavanana izay takian’ny vahoaka, fa ny fampiharana ny lalàna ho an’ izay nahavita heloka na iza na iza » hoy hatrany i Rivo Rakotovao manoloana ireo mambran’ny fampihavam-pirenena. Ankilany dia nilaza ny filohan’ ny CFM Mala Alphonse fa ny fanatonana ireo tompon’andraikitra tahaka ny filohan’ ny antenimieran-doholona tahaka izao sy ny mpanao politika ihany koa, dia tanjona ny hamory azy ireo an-databatra boribory. « Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana mazava tahaka izao ataonay izao no ahafahana manatanteraka fifidianana lavitry ny korontana » hoy hatrany i Maka Alphonse. Ankilan’izay dia nisy ihany koa ny fanentanana izay nataon’ny filohan’ ny CFM ny amin’ ny tokony hisian’ny fiara mientana sy ny fiaraha-miasa amin’ny fanamafisana hatrany ny demokrasia sy ny fifandimbiasam-pahefana eto amin’ny tany sy ny firenena malagasy .
Mazava be fa voakasik’izany fanambarana izany ingahy Marc Ravalomanana. Izy izay mbola manana sazy navoakan’ny fitsarana malagasy tamin’ny raharaha 2010. Gadra mandrapahafaty no azony tamin’izany, ary mbola tsy nisy didim-pitsarana mihitsy nanafoana an’io fanamelohana an-dRavalomanana Marc io. Mihevitra azy ho tsimatimanota Ravalomanana Marc ka na efa namoahana didim-pitsarana aza dia mihevitra fa madio. Mitady hialokaloka ao ambadiky ny fampihavanana ihany koa izy ka ho afa-maina. Izay fikafika samihafa rehetra izay io novakian’ny filoha nasionalin’ny HVM bantsilana io fa tsy mety.
Andraikitra ho an’ireo mpanao politika tsy nandatsa-drà no sahanin’ny komitin’ny fampihavanana, fa tsy ho an’ireo mpanao politika nandratsa-drà sy nandroba, ary namono olona teto amin’ny firenena. Tsy misy mpanao politika namono olona izany ka afaka hilatsaka indray. Ny famotsoran-keloka no mety ho azony fa ny fepetra manaraka an’izay dia ny tsy fahafahany milatsaka intsony.
Mikasika izay fampihavanana izay, dia hita fa manana andraikitra goavana tokoa ny CFM amin’ izao fotoana izao, satria ny asa izay tanterahin’ izy ireo dia miankina betsaka amin’ ny filaminana sy ny fampanjakana ny tany tan-dalàna eto Madagasikara. Ankehitriny tokoa mantsy, dia eo amin’ ny kihon-dalan’ny fifidianana isika amin’ izao fotoana izao, ary tsapa ny fahavononan’ny mpilatsaka sasany izay fantara fa nosazian’ ny lalàna. Hatreto anefa raha ny valinteny izay nomen’ny filohan’ ny CFM dia mbola tsy misy aloha hatreto ireo izay efa tazana manatanteraka fihaonana amin’ny vahoaka no nangataka na nanitatra fangatahana famotsoran-keloka teny amin’ izy ireo. Amin’ izao fotoana izao tokoa raha tsorina dia mbola betsaka ny baraingo izay mipetraka amin’ireo izay vonona hilatsaka hofidiana nefa voasazin’ny fitsarana, maro ny vahoaka mantsy ankehitriny no lasa fisainana ihany hoe fa rehefa izy no mangalatra sy mamono olona dia vonoina ary rehefa iza dia afaka miriaria tsy voasazy, ary mbola afaka mitety an’ i Madagasikara. Noho izany dia marina ny nambaran’ny filohan’ ny antenimieran-doholona hoe tsy tokony hisy ny fanavahana fa rehefa tsy nanara-dalàna dia mitovy avokoa. Ankoatra ity fihaonana tamin’ny filohan’ny antenimieran-doholona ity dia mbola hisy ihany koa ny fitetezam-paritra izay hotanterahin’ ny CFM, ary hiara-dalana amin’ izay ny fihaonana amin’ireo filoham-piangoanana efatra izay mitsangana ara-dalàna eto Madagasikara.